Indonesia in Focus: Stingy iyo Dulmi waa la wada dumin doonaa.
Stingy iyo Dulmi waa la wada dumin doonaa.
Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (362)
(Qaybta saddex boqol iyo lixdan, laba), Depok, West Java, Indonnesia, September 3, 2015, 16:20 pm).
Stingy ama ay martida ama haysata waa sifo ah in bani badan oo aadanaha, sida caadiga ah nooca bakhayli ma uu ogayn aqoonin in uu leeyahay dabeecad bakhayli, sababta oo ah Ibliiska (Shaydaan) waxaa mar kasta ka doodida uu fikirka in uu ku qanciyo ama doonteen ka walaacsan u dhaqmaan Bakhayl.
Sababtoo ah waa Bakhayl waa dembi weyn, xitaa subax kasta soo dagta Malaa'igta dhulka inay ilaahay ka baryaynaa in baabbi'in doonaa kuwa bakhayli.
Sida caadiga ah dadka bakhayli on saameynta ay Ibliiska dareemi doonaa caajis si ay u caawiyaan jir (awood) iyo inay allabari u bixiyaan hantida qabtay walaalahiinna, iyo xigaalkiinna, waalidiinta, Agoonta anam qaar ka mid ah, dadka saboolka ah ee ku nool deegaannada ay saameeyeen sida xanuun, deyn fara badan, ayaa halis ugu jira gaajo, sababtoo ah dareen bakhayli maalkiisa la dhimi doonaa Sakada (Sadaqo) marka Nabiga yiri maalka dhab ah in aan leenahay waa in Zakada waxay khasnad, sida kayd Aakhiro, Eebana bedeli doona iyaga u badin adduunka iyo aakhiraba.
Waxa intaa dheer in bakhayli jirin nooca kale ee insaanka inuu noqdo mid dembi weyn, taas oo Dulmi samaynaya. Camal Zhalim dembiyadooda la aan Ilaah waa cafiyan waxaa shirk (-hawlgalayaasha wadaajiseen Ilaah) samaynaya, tegey caawimaad si dhuuni dhaqanka / saaxirad derjada /, weydii qofka dhintay (Xajka xabaalo muqaddas, oo aan wax dhintay wax dhintay weydiin).
Nabiga naftiisa marnaba ku yidhi qoomkiisii uu qabrigaaga Madiina ee ziarahi. Nebigu si fudud u sheegay in qabriga Xajka ina xusuusinaya in aan sidoo kale u dhiman doonaan ka dib markii ay dhiman qabriga.
Waxa ugu muhiimsan waa duco aan u dhintay (qoyska) ah, ma Xajka qabriga, sidoo kale looma ogola inuu wax akhriyo Aayado al daahay qabuuraha, marka laga reebo guriga ama meel kale oo nadiif ah.
Falimaha Rasuullada Daalimiinta kale waa in ay dilaan aadanaha kale, sida qabashada hantida, awoodda (siyaasada), syarie dagaal marka laga reebo (sidii uu amarkii Eebe iyo Xadiiska), sida ay isu difaacaan cadowga ka galo duulaanka, sida dagaaladii Badar, Uxud ka dhacay waqtigii Nebi Muhammad.
Dila kasta oo kale (dagaalka) oo aan ku salaysan syarie jihaadka sida bebuat Daalimiinta. Waxaa intaa dheer, dagaalka ah taasoo lid ku ah dumarka, carruurta, oo ay taasi keentay kun oo barakacayaal ah (gaajo iyo dhibaato kale).
(BBC) - Ugu yaraan 13 milyan oo carruur ah ee gobolka Bariga Dhexe oo aan la aqoon karaan dugsiga ay sabab u tahay dagaalada ka, sida lagu sheegay xog ka soo Qaramada Midoobay.
Iyada oo ku saleysan macluumaadka la ururiyey in warbixinta xaq Waxbarashada Under Naarta, hay'adda Qaramada Midoobay u qabashada carruurta (Unicef) loo yaqaan 13.7 milyan oo carruur ah oo aan dugsiyada tagin wakiil 40% kuwa qalin jebiyey ee Suuriya, Ciraaq, Yemen, Liibiya, iyo Sudan.
Tiradaasi waa ka cabsaday inuu sii ballaarato ilaa ay ka gaarayso 50% in bilaha soo socda.
Unicef ayaa sheegay in tirada sii kordhaysa ee ahaa sababta oo ah kumanaan dugsiyada burburiyay intii dagaalada daba dheeraaday. Xogta Recent muujinaysaa ku dhawaad 9,000 iskuul oo ku yaalla Suuriya, Ciraaq, Yemen, iyo Liibiya looma isticmaali karo.
Dhab ahaantii, ee 2014, waxaa jiray 214 dhacdo oo weerar ku saabsan dugsiyada ee Suuriya, Ciraaq, Liibiya, ee dhulka Falastiin, Sudan, iyo Yemen.
Gaar ahaan in Suuriya, mid ka mid ah afar dugsi la xiray tan iyo bishii March 2011. Xaalada saameeyaa laba milyan oo caruur ah da'da dugsiga.
Gaar ahaan in Suuriya, mid ka mid ah afar dugsi xidhay tan iyo bishii March 2011. Waxaa si toos ah u saameeya laba milyan oo caruur ah da'da dugsiga.
"Culayska dagaalada ba'an ay carruurta ee gobolka dareemay. Ma dhaawac jirka oo kaliya in ay dugsiyada, laakiin quusan dareemay jiilka ah ee carruurta da'da dugsiga oo u aragno in rajadooda mustaqbalka iyo daalay, "ayuu yiri Peter Salama, agaasimaha Unicef ee Bariga Dhexe iyo Africa.
Sida laga soo xigtay Salama, saameynta ayaa sidoo kale dareemay by macalimiinta. Warbixinta waxa ay u muuqataa in ay dil iyo afduub ka mid ah ardayda, macalimiinta, iyo shaqaalaha barayaasha u noqday sidaas u caadiga ah ee gobolka Bariga Dhexe.
Sidaa darteed, kun oo macalimiin ka tagay shaqadii ay hayeen sababtoo ah khatarta ugu waa weyn.
Salama ayaa sheegay, UNICEF waxay u baahan tahay maalgelin dheeraad ah US $ 300 milyan ee sannadkan si loo hagaajiyo galaangalka waxbarasho ee caruurta ah ee Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika.
(BBC) - Ugu yaraan 12 reer Suuriya ayaa isku dayaya in ay soo galaan Greece Maanshaynay biyaha ee dalka Turkiga markii doon ay ku safrayeen degtay.
Mid ka mid ah dhibanayaasha ahaa wiil oo laga helay xeebta ee booliska Turkish iyo sawir wiilka caroodeen beesha caalamka.
Sawirkaas ayaa waxaa ugu horaysay la daabacay wakaalada wararka ee Turkey waa mawduuc trending dunida oo dhan ah.
Kumanaan ka mid ah muhaajiriin ah ayaa ku dhintay tan iyo bilowgii sanadkan ee isku dayaya in ay soo galaan Yurub by badda.
Sida laga soo xigtay saraakiisha ilaalada xeebaha Turkish, koox ka mid ah muhaajiriin ka tago Turkey dhex Jasiiradda Bodrum jasiirada kale ee Kos in Greece aroortii Arbacada (02/09), laakiin laba doomood oo ay ku safrayeen degtay yar ka dib.
Laba iyo toban jirkooda, oo ay ku jiraan shan carruur ah, ayaa laga helay ciidamada ammaanka ee Turkish.
Of the qiyaastii 23 tegey inay Greece dad lagu qiyaasay in kaliya sagaal ka badbaaday, qaar ka mid ah xirnaa jaakad nolosha iyo dabaalan dhinaca xeebta.
Rajo ka helo badbaaday si isa soo taraysa caato ah.
Photos of wiilka ku dhintay, waxaana la xaaqay hirarka xeebaha u dhow Bodrum daabacay hay'adaha aad u yar ayaa laga helay agagaarka 06,00 mar deegaanka.
Wiilkan oo ku dhintay lama garanayo magacaabay Aylan.
Walaalkeed, Galip shan sano jir, iyo hooyadiis, Rihan, dhintay dhacdadan.
Axmaqnimo bakhaylnimo baabbi'in doonaa AADANAHA
Jabir bin 'Radi Abdillah anhu isna wuxuu ku yidhi, "Nebigu sallallaahu' Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri, 'Iska aad taxadir ka dhanka ah kezhaliman sababtoo ah kezhaliman waa gudcur-gudcur Maalinta Qiyaame. Oo aad taxadir ka dhanka ah nooca bakhaylnimada bakhayli sababtoo ah waa waxa dadka baabbi'inayay aad ka hor. Bakhaylnimo in ku dhiirigeli inay dhiig daadiyaan, iyo sababeeyaan sharaf. "
Tani Abduh Xadiiska. Xadiiska Imam Muslim (no. 2578), Ahmad (III / 323), al-Bukhaari ee al-Adabul simplex (no. 483), 'Abd bin Humaid (no. 1141), al-Bayhaqi (VI / 93 oo X / 134) iyo 4161 kitaabkii Syu'abul Iimaan (no. 10 338), iyo al-Baqawi in Syarhus Sunnah (no.)
• اتقوا: cabsan. Magac ahaan, taxaddar iyo fogaado.
axmaqnimo ah, wax isdaba marin iyo Xad gudbee. Macnaha aasaasiga ah ee Daalimiinta aan gelinaya wax meeshiisii. 
• الشح: bakhaylnimada aad, ka sii adag tahay in ay ka soo baxdo khasnaddii grabber ah. Qaar kale waxay dhihi grabber dabeecadda / martida / bakhayli xaq darro xad-dhaaf ah. haraysa ama hunks, maal karo oo sidoo kale matali karo ma'ruf haysata leh (wanaagsan). 
• حملهم: iyaga ama sababta falalka ay ku dhiiri geli.
• سفكوا دماءهم, oo dhiiggooduna daadan. Magac ahaan, wax badan oo ka mid ah midba midka kale dilo qayb ahaan.
• استحلوا: qiil. In uu yahay, wax xaq ka dhigaa dumarka waxaa lagu reebay Eebe Ilaaha Qaadirka ah u yeeshaa, markaas oo waa calool adag oo naagihii.
In xadiis la joogo ma jiro digniin ah Jawrfalinc iyo talooyin inay gar sameeyaan. Islamic Shareecada gebi ahaanba cadaalad ah, ku amartay in ay caddaaladda samaysid, oo laga mamnuucay Jawrfalinc. Ilaahay wuxuu leeyahay,
Waxaad dhahdaa, "Rabbku ii sheegay inuu gar sameeyo ..." [al-A'raf / 7: 29]
Dhab ahaan yaa Eebe (aad) in ay si cadaalad ah ... "sheegayaa [An-Nahl / 16: 90]
Dadka rumaysan oo ha isku daraan ilaa ay Iimaan la arxan (shirk), ay yihiin kuwa aad u hesho dareen ah ammaanka iyo inay hanuunsanyihiin. "[Al-An'am / 6: 82]
Illeen iimaan in maamulaha oo dhan, iyo laamo, ku Zahir iyo maanka, wax walba waa caddaalad ah, sida ka soo horjeeda cadaalad daro.
Taada Caddaaladda iyo maamulaha waa in la aqoonsado oo mengikhlaskan tawxiid oo kaliya in ay Eebe kaliya, aamin ah magacyada iyo sifooyinka uu wanaagsan, iyo diinta mengikhlaskan iyo cibaadada kaliya in Ilaahay.
Ugu kezhaliman Daalimiinta sameynayo shirk, la wadaajiyo Eebe, shirkigu, sida uu hadalka:
(Xusuuso) markuu ku yidhi Luqmaan in wiilkiisa, markii uu siiyey cashar kii, "wiilkaygiiyow! Adigu ma ka sheegi doontid Eebe, illeen Eebe la wadaajinaysaan (Eebe) waa cadaalad darro weyn "[Luqman / 31: 13].
Sababtoo ah cadaalad ah waxay ka dhigan tahay in ay ku riday wax meel iyo jimicsi xuquuqda in looga baahan yahay. Daalimiintana aysan wax meel.
Xuquuqda kuwaas oo xaq u weyn oo ugu qasabka ah ee Eebe ka Sarreeya Addoomadiisa. Addoonkii waa in ay ogaadaan Alle iyo cibaadada kaliya isaga, isaga oon Mushrikiin ahayn waxba. Markaas shaqeeyaan qodobada muhiimka ah ee rumaysadka, shareecada Shareecada Islaamka sida oogaan salaadda, waxayna bixiyaan Zakada, Soonka Ramadan, Xajka Baydka, jihaadka Jidka Eebe la hadalladiisa iyo falimihiisana, midkeenba midka kale xaqnimo iyo samir. Ha samayn mid ka mid ah disyari'atkan in uu yahay nooc ka mid ah axmaqnimo.
Ay ka mid yihiin camal cadaalad ah oo buuxiya xuquuqda Nabiga Sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii iimaanka sida iyo jacaylka, jacaylka dheeraad ah oo uu sallallaahu' Laahu calayhi wa calaa aalihii badan kulli waxyaalaha noolnool, adeeca, sharaf, ammaano, oo muhiimado ah si oo erayadiisana sare ee amarka iyo erayadii dadka kale ,
Halkii, waa arxan weyn, haddii addoon ah oo aan buuxin mid ka mid ah xuquuqda Nabiga Sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii.
Ay ka mid yihiin caddaalad tasbiixsadaan oo jecel Radi ka anhum Rasuulka Ehelu. Alle iyo Rasuulkiisa sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii ayaa sheegay in wanaagga badan iyo ammaan oo saaxiibo ah g marka la barbar dhigo kale ee bulshada-ummadu. The anhum Ehelu Radi waa sida ugu fiican ee aadanuhu ka dib markii Anbiyadii iyo Rusushii. Ehelu yihiin kuwa ugu duceeyey Eebe waxaana damaanad qaaday si ay u helaan Jannada. Imaanshiyaha Islam noo waa mid ka mid ah oo ah midhaha halganka, jihaadka iyo allabari oo ah anhum Ehelu Radi ah.
Sidaas darteed, sida arxan badan dadka dhaleeceeyo, cay, berate anhum Ehelu Radi ah. Caayin Ehelu ku muhiimad ahaayeen caayaya of Alle, Rasuulkiisa sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii iyo Islaamka. Sababta oo ah in ay ammaanaya Alle iyo Rasuulkiisa sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii. Xitaa Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii wuxuu reebayaa caayo ah Ehelu. Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:
Ma waxaad berate saaxiibaday !! Demi Rabb Yang naftayda gacmihiisa, in kiiska cid idinka mid ah ku siin dahab infaq Buur Hamiday, waxa aan gaadhin qiimaha iyaga infaq inkastoo (ay infaq kaliya) mid Mudd (sida Timir laba dhan-) oo aan sidoo kale kala bar [. 4]
Kuwa berate aan saaxiibo, markaas inkaar iyada Eebe, Malaa'igta, iyo dadkoo dhan! 
Waxaa ka mid ah fal kale oo dulmi u hibeeyeen ilaa ay labada waalid, xirmaan qaraabonimo, buuxiya xuquuqda qaraabada, saaxiibada iyo dadka nagula macaamiloodo. Iyo naxariis ma waxaas oo dhan waa aanu buuxin.
Eraygaaga ii xuquuqda nin iyo naag waa nooc ka mid ah caddaaladda kale. Qof kasta oo lagu dhammayn, ka dibna uu daalimiinta.
Human Menzhalimi noocyo badan, oo kulligoodna waxaa lagu soo ururiyey in erayada Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii in sagootiyey Hajj':
Sida runta ah aad dhiig, hantidaada, sharaftaada, wax walba waxaa korkiinna ku reebay maanta sida sharci darrada ah, bishaan, iyo dalka. 
Sidaas, axmaqnimo oo dhan waa gudcur on Maalinta Qiyaame. Dembiilayaasha la cadaabayo sida waafaqsan heerarka kezhalimannya. Dadka soo jawaabin dizhalimi ka rayraynaya wanaaggii oo dad ah kuwaas oo samayn doona Dulmi sida. Haddii ay wanaaggii aan lahayn mar dambe, ka dibna xumaantay diambillah dadka dizhalimi sida oo lagu eedeeyay in ay kuwa Dulmi.
Alle reebayna kezhaliman noqday, oo Alle ayaa sidoo kale ka dhigaysa in addoomadiisa ka mid sharci darro ah. Eebe Kaliya ugu hadalka, wax falniin iyo jawaabaha uu.
Ilaahay ayaa sheegay in Qudsi Xadiiska:
Nabiyow addoomadeyda! Runtii waxaan reebaan arxan i dul jooga, oo anigu waxaan taas oo aad ka mid sharci darro ah, ma aad menzhalimi kasta! 
Taasi waa, in Eebe Subhanahu wa imtithaal reebaan Dulmi dhaqmo ha Ahaato Addoomadiis iyo mamnuucayo ay menzhalimi labada dhinac, sababtoo ah axmaqnimo laftiisa gabi ahaanba waa la reebay. Ilaahay wuxuu leeyahay,
... Oo anigu ma menzhalimi addoommadayda ahaa. [Qaf / 50: 29]
Alle wuxu leeyahay:
..., Eebe ma doonayaan axmaqnimo ay addoommadiisa. [Al-Mu'min / 40: 31]
Axmaqnimo waxay leedahay saddex nooc:
1. axmaqnimo aan la cafiyey Eebe, waa shirk, la wadaajiyo Eebe Mushrikiin. Ilaahay wuxuu leeyahay,
Dhab ahaan yaa Eebe uma Dambi dhaafo (Dambiga) sida la Wadaajinina (shirk) oo ka dhaafaa waxaa wixii (dembiga) ka badan (shirk) u yahay qof walba wuxuu doono. Ruuxii shirkigu Eebe, Eebe, oo uu galo dembi weyn. [An-Nisa '/ 4: 48]
2. naxariis looma ogola doono Eebe Ilaaha Qaadirka ah, kuwaas oo arxan qayb addoonkii dadka kale. Ay ka mid yihiin in ay caddaalad ku qumman oo Eebe ka aarsan axmaqnimo oo addoommadiisa dhex joogay sida ay heerarka ay kezhaliman.
Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:
Illeen kezhaliman waa gudcur on Maalinta Qiyaame 
Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii sidoo kale yiri:
Dhab ahaan yaa Eebe dhab ahaan u dhigto (rigoore) Daalimiinta, laakiin haddii uu u jirdil, uma uu la hadlo "Markaas Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii akhri aayadda (taas oo macnaheedu yahay):". Oo sidaas daraaddeed Cadaabka Eebahaa markuu doono inuu jirdilay (dadka) dal oo wax Dulmida. Indeed, Ciqaabtiisu waa darantahay, oo aad u daran "[Hud / 11: 102]. .
Ku alla kii isaga halkaas ku mazhlamah (kezhaliman) wuxuu walaalkiis haddii uu dhaawac sharaf ama wax (hantida qaaday zhalim) waxaa iska lahaa walaalkiis, ha ka baryo si uu isaga haatan menghalalkannya, maxaa yeelay, halkaasaa (Maalinta Qiyaame) ma Diinaar oo dirham. Haddii uu leeyahay camal wanaagsan, waxa la qaadi doonaa si (bixinta) sida waafaqsan xubnaha dizhalimi la kezhalimannya. Oo hadduusan jirin Camal fiican, ka dibna khaladka walaalkiis qaaday xukumay  in.
... Iyo taxaddar ah oo ay baryadii dadka dizhalimi, sababtoo ah waxaa jira wax carqalad ah ma u dhexeeya salaadda Eebe .
3. axmaqnimo in ay tahay in doonista Alle, hadduu doono, wuuna cadaabi doonaa. Hadduu doonana wuxuu isaga u dambi dhaafo. Oo kuwaasu xadgudubyada lagu sameeyey addoon u Eebihiis, marka lagu daro uga dhuumato. 
Alle bixisaa Jid Toosan Addoomadiisa raba inuu ku soo laabto caddaaladda. Ku alla kii isaga ka duwan yahay, ka dibna wuxuu ku noqon doonaa arxan la jiiday xagga jahannamo.
Oo aad taxadir ka dhanka ah nooca / hunks bakhayli, sababtoo ah bakhaylnimada / bakhaylnimada in uu yahay waxa dadka baabbi'inayay aad ka hor
Maxaa yeelay, ku bakhayli Xoolo sameeyo dadka ururiyaan maal, si walba iyo meel kasta, iyadoo aan loo eegin licit iyo sharci darrada ah -na'udzu billah-. Xitaa Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii ka yiri:
(Waa bakhaylnimo) si ay u dhiiri (dadka na hor) inay dhiig daadiyaan, iyo sababeeyaan sharaf.
Haraysa / Grabber ay dhiig u daadiyaan sidii wuxuu arkay ma qabsan karo, gool ay haddii dhiigga daadanaya.
In xadiiska kor ku xusan, Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii dadka uu ka mid ah laba kiis oo naxariis iyo gaajo hahaysee / bakhaylnimada digay. Zhalim waxaa lagu aflagaadeeyay dadka kale, iyo in uu yahay haraysa hunguri ku saabsan waxa dadka kale leeyihiin. Labaduba waa falal in la Xarrimay. Allah Subhanahu wa imtithaal:
... Oo bal yaa isaga ka dhawray of gaajo hahaysee, ka dibna ay yihiin kuwa ugu nasiibka badan. [Al-Hashr / 59: 9]
Aayaddani waxay soo jeedisay in dadka aan naftiisa sii out of bakhaylnimada, isna wuxuu lahaa nasiib jirin. Maxaa yeelay, kuwa ugu nasiibka badan yihiin oo ay ku waardiyaynayaan Alle ee parsimony. Waxaan Alle ka baryaynaa inuu na ilaaliyo ka axmaqnimo ah oo sii nafteena ka bakhaylnimada iyo meanness-sidooda. 
Alle iyo Rasuulkiisa sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii sidoo kale cambaareeyey iyo cambaareeyay nooca hunks, martida iyo Bakhayl. Curmudgeonly, martida iyo bakhayli waa nooca axkaamta, tabi'at dabeecad oo masaakiin ah iyo sidoo kale ay ka mid yihiin mid ka mid ah cudurada ka mid ah Muslimiinta. Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii mar walba xaggiisa waswaasiye ka magangal Eebe ka soo guryaha. Sidee baan kari waayeen?! Maadaama cudurka ayaa ku dhintay tiro badan bulshada, laakiin waxa ay sidoo kale keentay in nooca soo maleegay jiideen Jahannamo, wal'iyâdzu Billah.
Waxaa ka mid ah Dadka waxaa ka sako soo sartay bakhayli oo Alle ayaa u dardaarmay dul saaran, marka sadaqada laga fuulo si aad u nadiifiso uu hantida iyo isdaahirin. Waxaa ka mid ah bini'aadanka waxaa sidoo kale waa ay martida ah iyo bakhayli naftiisa, xaaskiisa, iyo carruurta uu ku wajahan, sidoo kale bakhayli dhinaca qof qaraabo dhow, saaxiibadii ugu fiican, martidiisa, masaakiinta, iyo wax ka badan.
Taasi waa sababta uu ahaa waxaa halis ku ah in ay adag tahay in al-Quraanka iyo Sunnaha dhab ah qofka uu leeyahay cudurka iyo nooca hunks, martida iyo tan Bakhayl.
Hana abid dadka ay martida u yihiin waxa Eebe Siiyey oo Fadli ah inay, u malayn in (haraysa) waa u roon tahay iyaga, laakiin (haraysa) waa xun iyaga u. Waa maxay (maal,) kaas oo ay kikirkan waxaa lagu xiran doono (qoorta) Maalinta Qiyaame. Eebaa iska leh mid ka mid ah dhaxalka (waa maxay) ayaa samada iyo dhulka. Eebe Mahateliti ogyahay waxaad Camal falaysaan. [Ali "Imran / 3: 180]
Oo dadkii oo bakhayli iyo dareen isku filan (uma baahna caawimo Eebe), oo beeniyey (abaalmarinta) ugu fiican, markaas waxaannu doonaynaa inaannu si fudud u-xaq isaga Jidka inay cidhiidhi ku jira (murugo). Oo Xoolo aan faa'iido isaga in haddii uu ku wada baabba'ay. [Al-Lail / 92: 8-11]
Abuu Hureyrah Radi anhu, ayuu yiri, "Rasuulka sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:
Marnaba isugu doonaa inta u dhaxaysa kekikirandi keimanandan wadnaha addoon weligiin .
Laga soo bilaabo Abuu Hureyrah Radi anhu in uu maqlay Rasuulka sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:
Haraysa ayaa sii watay oo mid ka mid ah berinfak waa sida laba nin oo xiran oo hubkiisa (gaashaammadii) kaas oo ku saabsan labada ilaa caanaha si lafta kalxanta ah. Kuwa berinfak berinfak laakiin ma aha in uu horumariyo doonaa hubka wuxuu ku xidhay meel si loo qariyo tallaabo hore. Iyadoo grabber in uusan ku qaataan ee wax ka heli doontaa wareegga hubka u xoog badan in qabsadey meel kasta iyada socda, ay isku dayday in ay u nasato, laakiin hubka aan diyaar u ahaan umuuruhu .
Curmudgeonly, martida iyo bakhayli ay ka mid yihiin xaaladaha baabbi'in, sida uu cadeeyay nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii sheegay,
Saddex kiis baabbi'in (ie) ku Tolosnaada (bakhayli) waxaa ay addeecin, hawadooda raacay, iyo amankaag ula baxo uuna ka badan 
Dooni Rasûlullâhn ka magan gal Eebe kezhaliman,
Ya Allah, sida runta ah waxaan kaa magan, waaba intaasoo aan Baadida ah ama si khaldan (Ibliiska ama dabeecadda Shaydaanka by), khalad ama dulmiyey sameeyo, Godoo kale ama qof majara habaabiyey, menzhalimi (silciya) ama dizhalimi (silcin jiray), oo waxaad ka samaysaa nacas ama lagu siri .
Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii sidoo kale waswaasiye ka magangal Eebe Ilaaha Qaadirka ah ka dabiiciga ah ee hunks, bakhayli iyo martida. Waxaa ka mid ah Salaadda in uu akhriyo ahaa:
Ya Allah, sida runta ah waxaan kaa magan ka fulaynimo, waxaan kaa magan galay in ka nooca hunks / haraysa, waxaan ka magangalay Mudari soo laabtay nolosha ka mid ah ugu yaraan (neefo), oo waxaan kaa magan galay in ka yar ahaynse (jirrabaadda) ee adduunka iyo cadaab qabriga. 
Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii sidoo kale wax badan oo Barya hoos ku qoran:
Ya Allah, sida runta ah waxaan kaa magan-buuqa, murugo, tabar, caajisnimada, nooca curmudgeonly (bakhayli), fulaynimada ah addoonsiga deynta,, oo ay gacanta ku dadka kale. 
[Guuriyeen ka edition magazine ee As-Sunnah 10 / Year XVII / 1435H / 2014M ah. Publishers Guddiga Joogtada Foundation Istiqomah Surakarta, JL. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57 183 Tel. 0271-858197 Fax 0271-858196]
Posted by needsjobslowongankerja at 7:27 PM